Posted by Tranquillus | Déc 6, 2021 | Shabakada
Sannadka 2050-ka, dadka Afrika ku nool waxay gaari doonaan 1,5 bilyan. Kobaca xooggani wuxuu u baahan yahay isbeddelka magaalooyinka si loo daboolo baahiyaha dhammaan dadka deggan magaalada loona xaqiijiyo horumarka bulshooyinka Afrika. Udub dhexaad u ah isbeddelkan, Afrika laga yaabee in ka badan meelaha kale, dhaqdhaqaaqa ayaa door muhiim ah ka ciyaara, haddii ay tahay in la gaaro suuqa, goobta shaqada ama booqashada qaraabada.
Maanta, inta badan dhaqdhaqaaqan waxaa lagu fuliyaa lug ama habab dhaqameed (gaar ahaan Afrikada Saxaraha ka hooseeya). Si loo daboolo baahiyaha sii kordhaya, loona dhiso magaalooyin waara oo loo wada dhan yahay, magaalooyinka waaweyni waxay helayaan habab gaadiid badan, sida BRT, taraamka ama xitaa metro.
Si kastaba ha ahaatee, hirgelinta mashaariicdani waxay ku salaysan yihiin faham hore oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa gaarka ah ee magaalooyinka Afrika, dhismaha aragti fog iyo maamul adag iyo moodooyinka maalgelinta. Waa qaybahan kala duwan ee lagu soo bandhigi doono Clom-kan (koorsadan furan oo ballaaran) kaas oo loogu talagalay jilayaasha ku lug leh mashaariicda gaadiidka magaalooyinka ee qaaradda Afrika, iyo guud ahaan dhammaan kuwa jecel isbeddelka qaaradda Afrika. ka shaqeeyaan magaalooyinkan.
Clom Tani waa natiijada habka iskaashiga ee ka dhexeeya laba hay'adood oo ku takhasusay arrimaha gaadiidka magaalooyinka ee magaalooyinka koonfurta, kuwaas oo ah Wakaaladda Horumarinta Faransiiska (AFD) iyada oo loo marayo Campus (AFD - Cam), iyo Iskaashiga Horumarinta iyo Horumarinta Gaadiidka Magaalada (AFD). CODATU), iyo laba Hawl-wadeen oo Francophonie ah, Jaamacadda Senghor oo hadafkoodu yahay in ay tababaraan maamulayaasha awood u leh inay la kulmaan caqabadaha horumarka waara ee Afrika iyo Hay'adda Jaamacadda La Francophonie (AUF), oo ah shabakadda hormuudka ah ee jaamacadda adduunka. Khabiirada dhaqdhaqaaqa iyo gaadiidka magaalada ayaa la abaabulay si ay u dhamaystiraan kooxda waxbaridda ee Clom oo ay u bixiyaan khibrad dhammaystiran oo ku saabsan maaddooyinka laga hadlayo. Wada-hawlgalayaashu waxay jecel yihiin inay si gaar ah ugu mahadceliyaan kuwa ku hadla hay'adaha iyo shirkadaha soo socda: Agence Urbaine de Lyon, CEREMA, Fududeeyaha de Mobilités iyo Transitec.
READ La-gaadhsiinta khataraha
Dhaqdhaqaaqa magaalooyinka ee Afrika Diisambar 8, 2021Tranquillus
horeSharciga shaqada ee Yurub
socdaAnshaxa cilmi baarista
Ku wanaaji farsamadaada iibka SPIN Iibinta